Anisan’ny kandida hilatsaka hofidiana Filoham-pirenena i Jean Félicien Korodo.
Milaza ny tenany fa manana vina dia ny hanome 7 hetsy isan-tokantrano sy isam-bolana no tanjona lehibe ho azy. Mety hivaha ny olana maro, toy ny an’ny mpampianatra io, raha izany tokoa no tanteraka an !
Hatramin’ny omaly, dia nilaza ny hampihatra ny saran-dalana ho 500 ariary ny kaoperativa FMA ahitana ny kaoperativa Mirindra (194-163), Mihary (165), Sitraka (109), Kofitama (143), Mitambatra (166) ary Onja (192) manomboka rahampitso alarobia 01 aogositra. Andrasana ihany koa na hiova ny vidin-tsolika na hijanona amin’io ihany.